Olee otú iji merie ọgụ maka ndị na-ege ntị Site na-enweta na-arụ ọrụ na Twitter - Na-eme Ihe Site na Ọka Mmiri
Ọtụtụ ulo oru ntaneti n'Ịntanet na-abanye na usoro ahia ahia nke internet nke na-eme ka ha biarue ndi obula ha choro inweta. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụ na-eme ahịa ịntanetị ka ndị ahịa ha chọtara ebe nrụọrụ weebụ ha n'ọtụtụ ebe dị iche iche nke ụwa. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ na-eme mgbanwe ndị dị mkpa n'ụzọ ndị mmadụ si enweta ndị ahịa ha.
Social Media Marketing (SMM) na-enyere ọtụtụ ndị aka ịhụ ọtụtụ ọwa maka ntụgharị ahịa. Dị ka ọmụmaatụ, ndị mmadụ nwere ike iji Twitter iji mee ka ndị mmadụ bịa na ebe nrụọrụ weebụ. Twitter nwere ọtụtụ akụkụ nke ọtụtụ ndị webmasters jiri rụọ ọrụ ọganihu dị ukwuu na mgbasa ozi ahịa ha. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ọrụ pụrụ iche nke onye ọ bụla nwere ike iji mee ihe na Twitter - hybrid insurance plan. Ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa Twitter na-enye na ntuziaka a site n'aka Nik Chaykovskiy, Ụlọ elu Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ndị Nlekọta
Jikọta ndị na-ege ntị ziri ezi. Mgbe ị zigara tweet, ọ nwere ike inwe ọtụtụ mmadụ. Ndị dị iche iche nwere ike ịza ma ọ bụ banye na ubi ahụ. I kwesiri imuta ileghara ndi ozo ndi na-agagh a emegharia n'ime ndi ahia. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike izere ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ ghara igbu oge dị oké ọnụ ahịa ha nwere ike ịrara onwe ha nye onye ahịa.
Jiri retweets Retweeting bụ usoro nke nwere ike inyere ndị webmasters aka SEO. Akwụsị akwụkwọ na-arụ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ ndị ọbịa ma nwee ike ịmekọrịta ihe ọṅụṅụ mmiri..Otú ọ dị, ị ga-akpachara anya mgbe ị na-agagharị na nzaghachi. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịnweta ọkwa dị ịrịba ama nke ịza ajụjụ tupu izipu ihe nchịkọtaghachi.
Jiri vidiyo na ese foto. Foto, eserese na ọdịnaya vidio dị ka ọdịnaya ahịa. Bots nyocha nwere ike ịkọwa ọdịnaya a na-eme ya otu n'ime ụzọ ahịa ahịa kacha mma. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ nwere ike ịchọta ụzọ okike iji kwupụta echiche dị iche iche nke na-adịghị agụnye ọtụtụ okwu, nke nwere ike iwepụ oge elekere nke onye ọbịa.
Jiri mkpado meta maka ebe nrụọrụ weebụ. Nyocha nchọpụta bụ akụkụ dị mkpa nke nyocha ọ bụla webmaster. Ọrụ SEO ọ bụla na-amalite site na nyocha ọchụchọ zuru ezu. N'ihi ya, onye ọ bụla webmaster kwesịrị ime nchọpụta isiokwu nke zuru oke maka onye ọ bụla. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ kwesịrị ịmepụta ọtụtụ ụzọ isi nweta nkọwa ha atọ na ndepụta nke njikwa ihe nchọgharị Twitter.
Mara ezigbo ndị na-eso ụzọ gị. Mgbe ị na-eme ihe ọ bụla ịntanetị, ị ga-eme akụkụ dị iche iche nke mmepe weebụ na-arụ ọrụ maka engines ọchụchọ . N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ na-eji ike nke ahịa ahịa n'ịntanetị mgbe ha na-eme ka azụmahịa ha ruo ọkwa ndị ọzọ. Na Twitter, ị ga-amụta iji nwee ike itinye aka na ndị ziri ezi. Tinye oge gị na ndị ahịa naanị.
Kasị ahịa na-eme nke ọma na atụmatụ ahịa ha site na ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa. Ịntanetị nwere ọtụtụ ohere maka ndị dị iche iche ka ha nwee ike ịnweta ihe dị n'ime mmadụ dị iche iche na webmasters. Ndị isi ụlọ ọrụ nwere usoro mgbasa ozi mgbasa ozi pụrụ iche nke na-ewetara ha ọtụtụ nde ndị ahịa kwa afọ. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ị nwere ike iji Twitter iji nye okporo ụzọ maka ebe nrụọrụ weebụ gị dị na ntuziaka a. Ị nwere ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche dị ka ahịa ezubere iche na nkeonwe.